साउदी हिँडेका दुई नेपाली युवती ओमानको एअरपोर्टबाट बेपत्ता भएपछि…. – khabartime
साउदी हिँडेका दुई नेपाली युवती ओमानको एअरपोर्टबाट बेपत्ता भएपछि….
१८ भाद्र २०७६, बुधबार १०:३६ 42 पटक हेरिएको
तीन साताअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबियाका लागि उडेका दुईजना नेपाली महिला ओमानको विमानस्थलबाट बेपत्ता भएका छन् । काठमाडौंको एक मेनपावर कम्पनीबाट साउदी उडेका ती महिला श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए । तर, कसरी ट्रान्जिटबाटै कहाँ बेपत्ता भए भन्ने विषयमा प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन थालेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूलाई मानव तस्करीमा संलग्न समूहले ओमानमै लगेर बिक्री गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
मानव बेचबिखनका घटनामा यो नयाँ शैली देखिएको ब्युरोका निर्देशक एसएसपी ईश्वरबाबु कार्की बताउँछन् । श्रम भिसामा साउदी जानेहरूलाई बाटोबाटै गायब बनाएर अन्यत्र पुर्‍याइने गरेको ब्युरोले जनाएको छ । दुई युवती हराएको घटनामा मेनपावर कम्पनीले नै अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा उनीहरू ओमान छिरेका छन् ।
‘साउदी जाने महिलालाई दलालले युएई र ओमानको समेत भिसा लगाइदिँदा रहेछन्,’ अनुसन्धानमा आबद्ध ब्युरोका एक अधिकारीले भने, ‘जुन देशमा ट्रान्जिट हुन्छ, त्यही देशको एयरपोर्टबाटै उनीहरूलाई गायब बनाएर अन्यत्र पुर्‍याउने गरेको खुलेको छ ।’ नेपाल र साउदी अरेबियाबीच सीधा उडान नभएकाले ओमान वा युएईको ट्रान्जिट प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसैको फाइदा मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहले उठाएको हो ।
मेनपावर कम्पनीले एक/दुई दिनअगाडि मात्र टिकट काट्ने भएकाले उनीहरूले यसरी युएई वा ओमानको समेत भिसा लगाउने गरेका थिए । मेनपावरबाट जाँदा भन्दा अवैध रूपमा जाँदा धेरै कमाइ हुने आश्वासन दिएर यसरी मानव तस्करी हुन थालेको प्रहरीले जनाएको छ । जसबाट मेनपावर कम्पनीसमेत पीडित हुन थालेका छन् ।
यो घटनाले मानव तस्करीको विकराल तस्बिर देखाएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यसमा अन्तरदेशीय गिरोह संलग्न रहेको उनीहरूको भनाइ छ । श्रम भिसाबाहेकको अवस्थामा नेपाली युवतीहरू खाडी देश जान पाउँदैनन् । विगतमा भारतबाट लैजाने गरिएकोमा भारतमा समेत नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य बनाइएपछि मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले नयाँ शैली अपनाएको हो । नयाँ पत्रिका डेलीमा खबर छ ।
संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन
कतारका समुन्द्रले निल्यो एक